Bustolor bicolor beryl - recrystallized - Be3Al2 (SiO3) 6 - video
Tikniyoolajiyadda casriga ahi waxay hadda awood u leedahay inay soo saarto nooc kasta oo isku-darka bicolor beryl. Dabcan sumurud laakiin sidoo kale noocyo badan oo ah midabyo kale oo beryl ah sida cas ama taakuleynta casaan, casaan cad morganite, beryl cagaaran oo midab leh oo midab leh oo midab leh buluug-cagaar (Paraiba) or aquamarine. Noocyada kala duwan ee beryl waa naadir, iyo cabirka dabiiciga ah kama badna 1-3 ct. Sidaa daraadeed, shaybaar saafi ah oo midabkiisu yahay miisaan culus oo ka badan toban kiilo ayaa si dhab ah loogu qoondeeyn karaa dhagaxyo la qaadan karo.
Intaa waxaa sii dheer, tikniyoolajiyaddu waxay awood u siineysaa koritaanka walxaha roodhida leh ee midabada leh, kuwaas oo aan caadi ahayn dhagxaanta dabiiciga ah laakiin badanaa ku badan macdanta kale. Saamiyada noocan oo kale ah waxaa ka mid ah buluug-buluug ah oo iftiin dalxiis ah iyo gobal-bulug iyo qoto dheer Paraiba tourmaline, kuwaas oo aad loogu ixtiraamo dahabka dahabiga ah ee ay u baahan yihiin iyo awooda midabka leh.